Raha toa moa ka … havan’iza Rabetsitonta?
Wednesday, December 17, 2008 | Add a comment
Ny anarana hono tanim-boanjo, saingy misy kosa anarana tsy tanim-boanjo fa rehefa maheno patrônyma iray ianao dia midika hoe havan’i anona izany. Ohatra ny hoe Nirhy-Lanto. Original ilay anarana dia raha vao original toy io ny fanoratra azy dia fantatra hoe havan-dry Nirhy-Lanto iny izany. Sahala amin’izany koa angamba ny anarana hoe Ratsiraka (dôty). Moa ve raha vao mandre hoe Ratsiraka tsy havan’ilay Filoha teo aloha izay? Sa mety misy mitondra io anarana io fa tsy taovany tsy volovolony?
Ary ny hoe Rabetsitonta? Havan’ilay kandidà ho Filoha hoe Tovonanahary Rabetsitonta koa ve izay mitondra anarana hoe Rabetsitonta sa tanim-boanjo io?
Ny antony ipetrahan’ny fanontaniana dia betsaka ihany ny olona mitondra ny anarana hoe Rabetsitonta hita tao amin’ny fandaharan’ny fahitalavitra Viva. Farafaharatsiny aloha ireo samy mitondra ny anarana Rabetsitonta ireo samy mpihavana fa ny hoe havan’ilay “Tsy lahatra akory ny fahantrana” aloha dia tsy haiko.
Raha tsy diso aho, toa nomen’ny Filoham-pirenena toerana Loholona ingahy Tovonanahary Rabetsitonta io, amin’ilay 11 tendrena. Ny Grad Iloafo dia voalaza fa mitsipaka ankitsirano ny fanakatonana ny Viva TV na dia isan’ny mpomba ny fitondrana aza, izay fanapahan-kevitra heverin’izy ireo fa fanararaotam-pahefana tsy azo lavina.
Tsetsatsetsa tsy aritra: nanao top 8 an’ireo fahitalavitra azo eto Antananarivo i elman ao amin’i Madanight tamin’ny volana martsa 2008, ary voakilasy ho voalohany tamin’izany i Viva TV. Mitady hiombon-kevitra ihany aho izao mikatona izao ny Viva fa mahatsapa fahabangana ihany.
Farany, ny lafy tsaran’ity fanakatonana ity aloha dia mba tsy miady télécommande amin’i Smiley isa-maraina, ary tsy mihafy mihaino an’ity dessin animé Dora l’exploratrice ity intsony.
Raha toa moa ka … teny maloto (2)
Tuesday, December 16, 2008 | 4 comments comments
Nanontany i Tomavana hoe sao lalàna taloha hono no notantaraiko momba ilay resaka miombona dôty, fa ahoana i boay kely no voalako nefa tsy niombona dôty tamin-dRamose akory? Io fanontaniana io no nanosika ahy hanohy ilay fampianarana momba ny teny maloto, ka nahatonga ity lahatsoratra androany ity izay mitondra ny lohateny hoe Raha toa moa ka … teny maloto 2. Raha mbola tsy nahavaky ilay andiany voalohany ianao dia amporisihina hamaky azy vetivety.
Mba hampazava ny toerana sy ny tranga ahafahana na tsia mampiasa teny maloto dia holazaiko mazava tsara eto izy ireo.
Ohatra, ilay resaka toko sy andininy dia tsy teny maloto mihitsy raha ao am-piangonana, na amin’ny samy mpivavaka no iresahana azy. Tsy mahagaga noho izany ny mahita ireo mpitondra fivavahana rehefa mahazo fitenenana ao am-piangonana raha mamoaka toko sy andininy tsy tambo isaina arak’izay tratrany. Sahala aminao ihany io rehefa misy zavatra andraràna anao, ka sendra misy toerana ahafahanao manao azy dia tena araraotinao tokoa.
Tandremo ihany anefa ilay hoe “amin’ny samy mpivavaka”. Io dia midika hoe mpivavaka mitovy fironan-kevitra, ohatra hoe samy katolika, na samy mitandrina ny andro fahafito, … Fa raha protestanta ianao no manome toko sy andininy amin’ny katolika milaza hoe tsy azo ivavahana i Maria dia tsy mety izay. Raha amin’ny Sabatista no amoahanao toko sy andininy hoe azo hanina ny henan-kisoa dia tsy azo atao izay.
Ny momba ilay miombona dôty indray izao. Any am-pianarana ny ankizy no miombona dôty. Ny ankizy samy ankizy ihany anefa no mahazo miombona dôty. Raha misy ankizy iray tratranao niteny maloto dia azonao lakoina izy raha miombona dôty aminao izy kanefa tsy niteny dôty. Raha tsy miombona dôty aminao izy dia tsy azonao lakoina (fa misy zavatra hafa azonao atao, izay holazaina etsy ambany). Raha nahateny dôty koa izy dia tsy azonao lakoina.
Voalaza teo fa ny ankizy samy ankizy no miombona dôty. Izany hoe Ramose dia tsy mba miombona dôty amin’ny boay kely. Nefa kosa amin’ny maha-Ramose azy dia zo sy adidiny ny milako sy manafay ny boay kely raha tratrany miteny maloto izy ireny, ary izy ihany no afaka mitsara na maloto na tsia ny teny izay reny. Amin’ny maha-Ramose azy dia tsy anjaran’ny boay kely mpianatra ny milaza na mety na tsia ny ataony, matoa ataony dia mety izany. Ary fantaro fa vao mainka teny maloto noho izay efa voalaza ny filazana fa miangatra i Ramose, ary ny hany vokatry ny fimenomenonana dia ny mety ho fitomboan’ny sazy azo.
Raha mpianatra namanao no tratranao miteny maloto dia tsy azonao lakoina izy raha tsy miombona dôty aminao. Fa ny azonao atao dia ny mitoroka azy amin’i Ramose dia anjaran-dRamose ny milako azy araka izay hita tetsy ambony.
Raha sendra misy ny tsy fahazakana ny fahasiahan-dRamose dia tsy azo atao ny be konetaka. Tsy azo atao ny mitoroka azy amin’ny Surveillant Général satria ny surveillant Général rahateo tsy handroaka azy ety anelanelan’ny taom-pampianarana ary tsy hanome rariny anao akory. Ny hany azo atao dia ny mianatra tsara, maniry ho lasa Ramose koa any aoriana dia mamaly faty manao masiaka amin’ny taranak’i Ramose.